သွေးပေါင်ချိန်ကို မြင့်တက်စေသောဆေးဝါးများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
သွေးပေါင်ချိန်ဆိုသည်မှာ သွေးကြောနံရံရှိ သွေးဖိအားအတိုင်းအတာပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်သွေး 120 အောက်နဲ့ အောက်သွေး 80 အောက်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းဟာ သွေးပေါင်ချိ်န်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူအချို့ဆေးဝါးများဟာ သွေးပေါင်ချိန် ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ ၄င်းဆေးဝါးများမှာ -
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ အဖျားကျဆေးအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ ပါရာစီတမောလို့ လူသိများတဲ့ Acetaminophen ဟာသွေးပေါင်ချိန်ကိုမြင့်တက်စေတဲ့ ဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Acetaminophen ကို တပတ်မှာခြောက်ရက်လောက် သောက်သုံးသူတွေမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း 34 ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာတယ်လို့ လေ့လာမှုတခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆေးကောင်တာတွေမှာ အလွယ်တကူ၀ယ်လို့ရပြီး အသုံးများတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဖြစ် ပါတယ်။ NSAID ဆေးဝါးအမျိုးအစားထဲမှာအက်စပရင် (Aspirin)၊ အိုင်ဗျူပရိုဖန် (Ibuprofen) စတဲ့ ဆေးဝါးတွေပါ၀င်ပြီး အဖျားသက်သာစေရန်၊ အရောင်ကျစေရန်နှင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုသက်သာစေရန် အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
NSAID ဆေးဝါးတွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ ရေကိုစုပုံစေပြီးသွေးပမာဏကို များပြားလာစေ ပါတယ်။ သွေးပမာဏများပြာလာတာနှင့်အမျှ နှလုံးကလည်းခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ညှစ်ထုတ်ရ တာကြောင့် သွေးကြောအတွင်းဖိအားများလာပါတယ်။ NSAID ကိုတပတ်မှာ6ရက်7ရက် သောက်သုံး သူတွေမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေဟာ 38% ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။
3. စိတ်ကျရောဂါ ကုဆေးဝါးမျာ (Anti-depressants)
စိတ်ကျရောဂါမှာအသုံးပြုတဲ့ venlafaxine, bupropion, desipramine and phenelzineစတဲ့ ဆေးဝါးတွေက ဦးနှောက်တွင်းရှိဟော်မုန်း (norepinephrine, serotonin, dopamine) ပမာဏကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်တက်လာတဲ့ အထောက်အထားတွေရှိပေမဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
4. Birth-Control Pills (သနေ္ဓတားဆေး)
သနေ္ဓတားဆေးသောက်သုံးတဲ့ အမျိုးသမီးများအထူးသဖြင့် အ၀လွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာသွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားခြင်းကို ခံစားရတယ်လို့ အမေရိကန်နှလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။
5. နှာခေါင်းပွင့်ဆေး (Decongestants)
Phenylephrine, Oxymetazaline ကဲ့သို့သော နှာခေါင်းပွင့်ဆေးတွေဟာ သွေးကြောတွေကို ကျဉ်းသွားစေတာကြောင့် သွေးကြောတွင်းရှိဖိအားကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။
သွေးပေါင်ချိန်ကို မြင့်တက်စေတဲ့ဆေးဝါးထဲတွင် ခေါင်းတခြမ်းကိုက်သောရောဂါ (migraine) တွင် အသုံးပြုသောဆေးတွေ ပါ၀င်ပါတယ်။
ကဖင်းနှင့် အခြားစိတ်ကြွဆေးများသည်လည်း သွေးပေါင်ချိန်ကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။